Haweenay 75 jir ah oo Internet la’aan dhigtey laba wadan (maxaa u sabab ah) – SBC
Haweenay 75 jir ah oo Internet la’aan dhigtey laba wadan (maxaa u sabab ah)
Haweenay 75 jir ayaa la filayaa in la soo taago maxkamad isla markaana ay mudato xabsi ilaa 3 sano ah ka dib markii ay ku kacdey fal aanu horey qof da’deeda horey dunida uga sameyn taasi oo ah inay Internet la’aan dhigtey 2 wadan oo mid ka mid ah uu yahay dalka ay u dhalatey ee Georgia.
Wakaalada wararka AFP ayaa soo tabisay in haweenaydan oo aan magaceeda la shaacin sababo dhanka sharciga ah in ay jartey xargaha Internet-ka xambaara ee loo yaqaan fibre-optic cable linking ee isku xira wadamada Georgia & Armenia iyadoo ujeedada haweenaydaasi da’da ah lagu sheegay si ay guranaysay biraha duuga ah ee qashin ahaanta loo daadiyo.
Dhacdadan oo dhacdey 28-kii bishii March ee aynu ka soo gudubnay ayaa waxaa la sheegay in ay Internet la’aan dhigey mudo 12 saac ah wadamadaasi.
Zura Gvenetadze oo ah afhayeen u hadley wasaarada arimaha gudaha ee dawlada Georgia ayaa sheegay in haweenaydan ay aragtey xarkaha Internet-ka k adibna ay isku dayday inay goosato qaybo ka mid ah fiilooyinka iyadoo taasi ula dan laheyd wax afhayeenku ku sheegay tuugo ay ku kacdey haweenaydaasi 75-ta sano jirta.
Fiilooyinkaasi ayaa waxaa iska leh shirkada lagu magacaabo Georgian Railway Telecom, waxaana la sheegay in goor dambe lagu guuleystey in la xaliyo mushkilada ay kaliftey haweenaydaasi iyadana xabsiga la dhigo.